Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan Sh/Hoose, iskuna furay jidka Xeebta ee Muqdisho iyo Marka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada dowladda oo la wareegay deegaano ka tirsan Sh/Hoose, iskuna furay jidka Xeebta ee Muqdisho iyo Marka
MAREEG 5 February 2014 4 April 2019
Mareeg.com-Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa saakay la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Shabellaha Hoose, kadib dagaal xalay ka dhacay deegaanada Gendershe iyo Jilib Marka oo ay ku sugnaayeen xoogaga Al-Shabaab.
Gudoomiyaha Gobolka Shabellaha Hoose C/qaadir Maxamed Nuur ayaa sheegay in saddexdii maalmood ee u dambeeyay ay ciidamada dowladda ku jireen diyaar garow, isla markaana ay markii u horeysay ku guuleysteen inay isku furaan jidka xeebta ee isku xira Muqdisho iyo Marka.
“Howl galkaas diyaar garowgiisa dhowr maalmood ayuu socday, ciidamada magaalada Marka duleedkeeda ayay ka sifeeyeen dhamaan meelaha laga soo agaasimo ismiidaaminta ayaa cagta la mariyay”ayuu yiri C/qaadir Maxamed Nuur.
Gudoomiyaha Shabeelaha Hoose ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ay la wareegeen deegaanada Gendershe, Jilib Marka ilaa Dhanaane oo uu sheegay inay haatan ciidamada dowladda ka dhigteen saldhigooda ugu weyn Gobolka Shabeelaha Hoose.
“Waxaa u sheegeynaa shacabka jidka xeebta ee Muqdisho iyo magaalada Marka ee Shabeelaha Hoose in la isku furay, ciidamada waxay hada saldhig ka sameystaan Dhanaane oo aheyd dugsigii lagu tababari jiray ciidamada xooga dalka”ayuu yiri Mr Siidii.
Mar la weydiiyay qasaaraha ciidamada dowladda ka soo gaaray howl galkaas ayuu sheegay in labo askari kaliya ay ka dhaawacmeen, isla markaana Shabaab ay qasaare gaarsiiyeen, waxaana uu intaa ku daray inay ciidamada daba socdaan Shabaabka meelihii ay galeen.
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya C/wali Sheekh Axmed Maxamed ayaa dhowaan sheegay in sanadkan 2014 qorshaha Xukuumada yahay in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay gacanta ku hayaan, isla markaana uu socdo diyaar garow xoogan.
Maalmihii u dambeeyay ayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan ay wadeen ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM, waxaana ciidamo ka tirsan AMISOM oo dhowaan faarujiyay deegaanka Xoosh la sheegay inay u guureen Gobolka Shabeelaha Hoose
Somalia government forces liberate strategic town from Al Shabab